Buy Honda Blade (11.5Lks) in အင်းစိန် on ipivi.com
Honda . Blade . 110. လိုင်​ပါ ... အကုန်​အသစ်​​တွေ . Kilo . 2000 ​ကျော်​ . All new. ဝယ်​ထားတာ13 ​ခွဲ​ကျော်​ ... ပုံသာ ကြည့်​ကြည့်​​တော့ ..11ခွဲ ပဲ​ပေးပါ .. ygn .. 09788215740
အမည်: Honda Blade